China Quality Uye Wholesale Coaxial Cable, USB Hub, HDMI Cable - Connexions Technology (Dong Guan) Ltd.
Sravana Sameeralu Serial 4th Audio Cable
Wall Plate Cable Pfuurai
Koaxial Wall Plate
Kubatana Technology (Dongguan) Ltd.yakagadzwa muna 2004, inotungamira OEM / ODM Mugadziri weCables, Plastic Moulding uye Consumer Electronics.Connexions yakavandudza yazvino epasi rose mhando manejimendi manejimendi standard ye ISO9001: 2015. Vese vashandi veConnexionsâ € ™ vari kutora chikamu mune ISO9001 system yekuona vatengi vane zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye hunhu. Connexions yakave nhengo yeHTMLMDHIV inogamuchira kubvira 2010 Zvigadzirwa zvedu zvinoenderana neUL, CUL, ETL CIA / TIA, Rohs / Reach standard. Connexions ine anopfuura makumi mashanu epamberi tambo extrude michina uye zvivakwa zvevatengi zvigadzirwa gungano & 20 epurasitiki jekiseni kuumbwa, blister kurongedza zvigadzirwa zvemuchina. Kunze kwehunyanzvi hwekugadzira michina, kambani iri zvakare yakagadzirirwa neyakakodzera yekuyedza zvivakwa yekuitisa chengetedzo, kuita kwekuyedza uye kuongorora chiratidzo kuti ive nemhando yepamusoro uye kutevedzera zviyero. Tambo dzese dzino 100% kuyedzwa pamberi pekutakura.
Phono Preamp yeTurntable
RG6 Jumper Cable F-Type Chibatanidza
Roam Nhare 3G / 4G Wi-Fi Zvigadzirwa zveRV
Escable Edition 10000mAh Simba reBhangi 30W QC3.0 Yekukurumidza Charge
Coax Splitter 2.5GHz, DC Power Pass Splitter - 2/3/4/6/8-Nzira
2.2mm Optical Fiber Audio Tambo
USB3.1 Type-C Male kune Male PD Cable
CAT7A Bulk Ethernet Cable, 10G Indoor / Kunze Dual Inodzivirirwa Solid Copper S / FTP, 23 AWG 1000ft
CAT6A Bulk Ethernet Cable, Yakavharidzirwa S / FTP, 23AWG Solid Copper, Indoor.
CAT8 chigamba Cable
2 Chikwata Cable Plate
Snag-shoma isina kudzivirirwa CAT6 Patch Cables
30W PD Chaja ine 3.0 Inokurumidza Kubhadharisa
Mini Simba Bhangi 10000mAh
1-Genge Rakadzoserwa Cable Plate
10000mAh Simba reBhangi Escape Edition
8 muna 1 USB C Hub
HDMI 3RCA Wall Plate
1-Genge Wall Plate
USB C kune Mheni tambo
SPT-2 Rambi Tambo
SPT-1 Rambi Tambo
10000mAh Simba Bhangi
CAT5E chigamba Cable
Kero: Kwete. 6, Shenbao Road, Qishi Town, Dongguan Guta, Guangdong Province
Runhare: +86 13712346030
Nhanganyaya yeimwe dzemotokari tambo2021/04/25
Iyo Car Cable irwo rudzi rwekubatanidza tambo / waya mukati memotokari, iyo inogona kushandiswa kutapurirana kwazvino senge mabhatiri, metres, uye mwenje. Zvinodikanwa zvematare edzimotokari zvinowanzo kuve zvinodzivirira kutonhora uye kwakanyanya kupisa.
Kugona kusimbisa makamera edu ekunze neSolar Panel?2021/04/25
Mashandisiro ekushandisa kamera munzvimbo dzisingawanikwe simba?
Iwe une iyi mibvunzo nezve EV kuchaja?2021/04/24
Kune varidzi vemotokari dzemagetsi vakawanda. Ngatitaurei nezvemibvunzo yakati wandei pamusoro pemagetsi ekuchaja nhasi. Connexions Technology inopa Inotakurika Imba shandisa EV Chaja ine mhando yakanaka. Kugamuchirwa kuti utibate kuti uwane rumwe ruzivo.
Kugadzira Satellite TV inogamuchira system2021/04/23
Iyo Connexions RG6 Jumper Cable F-Type yakakosha kune yakakwira tsananguro yedhijitari Satellite TV Iyo Satellite TV inogamuchira system inoumbwa neuplink inotumira chiteshi (uplink kufambisa), satellite satellite stellar muviri (satellite-inotakurwa transponder) uye pasi inogamuchira ( downlink yekugamuchira chiteshi).
Mafomu akasiyana e50 ohm & 70 ohm Coaxial Cables2021/04/22
Iyo Connexions Technology inonyanya kugadzira mukugadzira marudzi ese eCoaxial Cables. Ngatidzidzei pamwechete nezve akasiyana maficha e50 ohm & 70 ohm Coaxial Cables.
Koaxial kurasikirwa dambudziko2021/04/21
Coaxial tambo anoshandiswa zvakanyanya muindasitiri, uye kurasikirwa kwavo kwagara kuri kunetsekana. Iyo yakanyanya kukwirira frequency iyo coaxial line inoshandiswa, iyo yakakura kurasikirwa.
Nzira yekubatanidza sei nekombuta Audio?2021/04/20
Chii chinosanganisirwa mune seti yemidziyo yekuteerera?
Iyo yakazara seti yemidziyo yekuteerera inosanganisira mamaikorofoni, masanganisi, mhinduro dzinodzvinyirira, mhedzisiro, zvakaenzana, compressors, mafaro, crossovers, vatambi vedisiki, masanganisi, masimba emagetsi, maspika ekukurudzira, vatauri vekuwedzera, Vanodzosera maspika, tarisa vatauri, mabass speaker.
Imba yekuvandudza isina kusimba yazvino system wiring2021/04/19
Hupenyu hwepamba munharaunda yanhasi haufanire kungova nyore uye kugadzikana, asi zvakare wakangwara, unovaraidza, uye wakachengeteka. Izvi zvinoda imba yakakwana isina kusimba wiring yazvino. Wiring yazvino isina kusimba ndiyo "tsinga" mukamuri repamba, vanoendesa akasiyana masekondi wedunhu kune akasiyana madhijitari, kuti vabudirire pamusoro pekushandisa zvinodiwa. Taura nesu nekuda kwemhando yepamusoro yeCoaxial Cables & Ethernet Cables.
Chii chatinofanira kutarisisa pakuisa Solar Panels?2021/04/16
Nekuwedzera kukurumbira kwetekinoroji yezuva, mutengo wayo wasvika pamutengo wekutenga mota nyowani. Mazuva ano, vazhinji vadiki vadiki varikufunga nezvekuisa masolar panels.
Chii chinonzi Phono preamp?2021/04/16
Connexions yakagadzwa muna2004 kuChina, inyanzvi inogadzira Audio, Vhidhiyo Tambo & Adaptors Vechidiki vasina kumboshandisa turntable vasati vatarisira kuti turntable ichazongotamba, kana zvirinani ingobatana kune yavo iripo stereo system kana masipika. Vanogona kunge vasina kunyatso kujekesa kana turntable yavo ikauya nePhono Preamp kana kwete.
Ungasarudza sei maCCTV Tambo?2021/04/15
Vhidhiyo Cable: SYV75-3 vhidhiyo tambo inowanzoendesa mukati memamita mazana maviri, 75-5 inopfuudza mukati memamita mazana mana, uye 75-7 inogona kuendesa 800 metres; kunaka kweCCTV Coaxial Cable kwakakoshawo, RG59U, RG6 Zvese RG11 neRG11 zvinoda 100% mhangura musimboti uye 95% yemhangura yakarukwa inodzivirira dura. Iko kunopikisa kukuru kwedunhu loop kubatana hakukwanise kudarika gumi nemashanu ohms. Kana chinhambwe chikapfuura mazana mashanu emamita, zvakafanira kufunga nezvekushandisa kwekutenderera kwetambo.
Maitiro ekuita zvirinani internet mune yako motorhome?2021/04/15
Kuwana inovimbika uye inowirirana nharembozha yeWiFi chiratidzo kunogona kazhinji kuve kwakaomarara kana iwe uri kuzororo pane musasa mune motorhome. Mahara WiFi inopihwa nemisasa mizhinji inoshanda chete kana iwe uri padhuze nehofisi saiti. WiFi dongles inowanzo kuve yakanaka, asi ivo vanogona kurwira kuti vawane chakasimba chakaringana chiratidzo kuburikidza nemadziro emota yako yemota kunze kwekunge iwe ukavaisa padenga.
Chenjedzo yekumisikidza yekuongorora kamera wiring2021/04/12
CCTV Vhidhiyo Cable: SYV75-3 vhidhiyo tambo inowanzoendesa mukati memamita mazana maviri, 75-5 inopfuudza mukati memamita mazana mana, 75-7 inogona kuendesa 800 metres; mhando yeCCTV Coaxial tambo, RG59, RG6, inofanirwa kutariswa. Zvese RG11 uye RG11 zvinoda 100% mhangura musimboti uye 95% mhangura yakarukwa inodzivirira dura. Iko kunopikisa kukuru kwedunhu loop kubatana hakukwanise kudarika gumi nemashanu ohms. Kana chinhambwe chikapfuura mazana mashanu emamita, zvakafanira kufunga nezvekushandisa kwekutenderera kwetambo.
Mhedzisiro ye blister kurongedza pasherufu hupenyu2021/04/11
Seyakajairika kurapa kurongedza, blister kurongedza inowanzo shandiswa mumhando dzese dzemishonga yekurongedza yatinotora mazuva ese. Kuwedzera kune akajairika mapiritsi emishonga, makenduru, makapisi uye zvimwe zvigadzirwa zvemishonga, zvakare inoshandiswa zvakanyanya muzvikafu, zvipodaidzo, uye matoyi.
Rokunze mumuhara zvinhu pamusoro armored waya2021/04/10
Iyo simbi zvinhu zvinoshandiswa mukati mekunze sheath zvakanyanya simbi tambo, simbi waya, aluminium strip (aluminium alloy strip), nezvimwe.
Inguva yakareba sei Mutauri Cable inogona kuva yako Mutauri?2021/04/07
Kureba kweComputa Cable kunofanirwa kunge kuri 2m ~ 2.5m, iri padyo nehurefu hunoshanda, uye kune imwe nhanho. Kana ikapfuura 5m, ruzha ruchaderedzwa, uye mhedzisiro nesimba remumhanzi zvichaderera, izvo zvinokonzeresa marara asingadiwe.
Musiyano uripo pakati peHDMI neDisplayPort2021/04/06
Iyo HDMI Cable uye DisplayPort Cable inomhanya pane imwecheteyo dhizaini uye musiyano coaxial yakakomberedzwa vaviri, uye ese ari maviri anoshandisa yakakwira-inomhanya uye yakaderera-magetsi kusiyanisa masaini kuendesa data, asi ndiko chete kufanana pakati pezviviri.
Rumwe ruzivo rweCCTV Wiring2021/04/02
Connexions Technology inyanzvi yekugadzira RG58, RG59, RG6 Coaxial Cables yeCCTV Wiring. Tiri kuzogovana rumwe ruzivo rweCCTV Wiring sezviri pazasi Chekutanga pane zvese, unofanirwa kunzwisisa waya dzinoshandiswa pakuongorora Kazhinji macamera anotarisa anoshandisa: CCTV coaxial Vhidhiyo tambo uye DC magetsi tambo. Iyo IP kamera inoshandisa tambo yeEthernet, yakananga PoE magetsi. Kwemirefu-refu, ese ari maviri analogog uye network yekutarisa makamera, Optical fibers inodiwa. Isu tinonyanya kushandisa single-mode fiber yekufambisa kure kure.
Chero mimwe mibvunzo yeEV kuchaja?2021/04/01
Kana mamiriro ekunze ari kupisa, kana pasina nzvimbo yekuzorora pakatenderedza chiteshi, varidzi vazhinji vemota vanozobvunza kuti: Mota yemagetsi ingavhurwa mumhepo inotonhorera kuti izorore panguva yekuchaja? musimboti, zvinokurudzirwa kubhadharisa kure nevanhu, ndiko kuti, kana vanhu vasiya mota panguva yekuchaja; izvi zvinogona kubvisa zvingangoitika njodzi kubva kunobva. Chechipiri, chiitiko chekuvhura chinodzora mhepo uchichaja chichawedzera mutero wepakati webhatiri uye chinokanganisa hupenyu hwebasa rebhatiri.Saka, kana uchisarudza chiteshi chekuchaja chekunze, edza kusarudza chiteshi chekuchaja chine dzimba dzekuzorora nezvimwe zvinotsigira. zvivakwa zvekuchaja. Mota painoroja, siya mota uende kulounge unomirira.
Chii chinonzi CATV system Wiring senge?2021/03/30
Centralized Network kuverenga nzira yeCATV Sisitimu Wiring: Iyi nzira inotsanangurwa se: vese vapasi vebazi vanogovera vanoiswa mukamuri isina kusimba yazvino, uye redhiyo tambo tambo inozvimiririra yakazvimiririra kubva kune yega yega mushandisi terminal (socket) kune inoenderana isina kusimba ikozvino imba batanidza neakagoverwa nebazi Chikamu chakatwasuka cheCoaxial Cable RG6, nzira yekuverenga yekushandisa tambo.
Ndezvipi zvakanakira Solar Panel Power Kuongorora Makamera?2021/03/29
Ndezvipi zvakanakira Solar Panel Power Kuongorora Makamera?
MIBVUNZO yeSolar Panels2021/03/26
Solar Panels inoda kucheneswa? Nekudaro zvinokurudzirwa kuti zvionekwe zvekuzviongorora gore rega uye sukurudza kana zvichidikanwa. Mazhinji makambani ekuchenesa mawindo ane anosvika-uye-kusuka system uye anofanirwa kukwanisa kuchenesa mapaneru ako.
Chii chinonzi New MacBook's Thunderbolt 4 port?2021/03/25
Chii chinonzi Thunderbolt 4? Sezvo iyo Thunderbolt interface yakaziviswa zviri pamutemo muna 2011, huwandu hwayo hwekuparadzira hwakawedzerwa kubva kune yekutanga 10Gb / s kusvika kuchizvarwa chechitatu / yechina chizvarwa 40Gb / s, uye iyo Thunderbolt 3 protocol kududzirwa kwavewo hwaro hwe iyo USB4 kududzirwa. Thunderbolt 4 yakaziviswa kuCES muna 2020, uye iyo yekupedzisira vhezheni yacho yakaburitswa mwedzi uno. Thunderbolt 4 inoenderana zvizere neiyo USB4 kududzirwa.
Ndeipi nyowani USB4?2021/03/24
Ose maviri USB 3.1 uye USB 3.2 akaunzwa kuti awedzere bandwidth, uye zvinangwa zvekugadzira zve USB4 zvinoramba zvisina kuchinja. Nekudaro, kuburitswa kweichi chirevo zvakare kubatanidza iyo USB Type-C ecology uye kudzikamisa kuvhiringidzika kwevashandisi vekupedzisira.
MacBook yakapusa cancel interface, USB-C Hub ndiyo yako Sarudzo yakanaka2021/03/22
MacBook yakapenga cancel interface-USB-C Hub ndiyo yako yakanaka sarudzo
Yekutanga nyika yakasimbiswa HDMI2.1 AOC Cable2021/03/21
Mazuva mashoma apfuura, Silicon Line uye GRL yakazivisa kuti yepasirese yekutanga inoshanda fiber fiber tambo iyo yakapasa iyo Ultra High Speed ​​HDMI® Certification (UHS Chirongwa) yapedza kuyedzwa kwechitupa kuGRL Taipei Laboratory.
Ndezvipi zviri nani? RG59 VS RG6 VS RG11 CableCTC Connexions ine makore gumi nemana ruzivo muOEM / ODM Kugadzira tambo dzeCoaxial dzinosanganisira RG59 VS RG6 VS RG11 Tambo. Ngatiedzei kutsvaga Icho chiri nani, RG59 VS RG6 VS RG11 Cable.Itâ € ™ s kusvika kune zvatiri kuishandisa.
Chii chinonzi USB4.0?2021/03/19
Iyo USB4.0 protocol inozotora iyo Thunderbolt 3 protocol yekusimudzira. Kutaura kuti izvi ndezvekuzivisa kweMicrosoft chiziviso cherezinesi remahara reThunderbolt 3, iyo yakakurudzira kusvika kweUSB4.0.
Ungamise sei mota netambo dzejumper2021/03/19
Wati wambosangana nemamiriro ezvinhu akadaro pawanga uchigadzirira kuenda kubasa mangwanani, asi ukaona kuti mota yanga yakanaka nezuro husiku haina kukwanisa kutanga? Zviri pachena kuti bhatiri rako rakafa kana kukuvara. Usazvidya moyo, nhasi ini ndichakudzidzisa hunyanzvi hwekuita. Mushure mekuidzidza, unogona kutanga mota yako nebhatiri remumwe munhu.
Wiring yeelevator Vhidhiyo Kuongorora2021/03/19
Iyo yekumisikidza yekutarisa nharaunda mune erevheta yakakosha. Elevator inofanirwa kukwira nekudzika isina kumira, uye iyo yekumisikidza wiring uye kutapurirana kweiyo erevheta network yekutarisa kamera inewo zvakakosha zvinodiwa. Parizvino, inowanzoshandiswa erevheta yakatsaurirwa Ethernet Cable hutachiwana, isina waya samambure zambuko kutapurirana.
FAQ yeCC Connexions 8 muna 1 USB C Hub Dock2021/03/19
FAQ yeCC Connexions 8 muna 1 USB C Hub Dock
Ndezvipi zvakanakira Solar Panel Vhidhiyo Yekutarisa zvigadzirwa?2021/03/19
Solar Panel Vhidhiyo Yekutarisa zvigadzirwa ndezvipi? kutapudza uye kutarisisa nzvimbo, kuongorora kwegedhi remagetsi, kuongorora moto pamasango, kuongorora kwakanyanya kwemuganhu, kuongorora kwemidziyo yekuchengetedza mvura, Kuongorora kwenzvimbo dzakakura dzekudyara nenzvimbo dzekudyara.
Chii chinonzi Kutinhira?2021/03/19
Vanhu vatsva kumalaptop havazive chinonzi USB-C chiteshi, kana kuti chii chinonzi Thunderbolt. Ivo chete vanoziva kuti MACBOOK PRO ine chiteshi cheThunderbolt 3. Zvichitaurwa zviri nyore, iyo Thunderbolt interface ndiyo imwe nzira kune USB TYPE-C
Chii chinonzi Low Voltage Wiring?2021/03/19
Mhando dzakajairika dzetambo dzinoshandiswa mune yakaderera-voltage wiring inosanganisira: RJ11 Tambo dzinoshandiswa kune nhare kazhinji. CAT5E uye CAT6 inoshandiswa kuDhijitari network uye kutakura odhiyo uye vhidhiyo masaini. Fiber optic inogona kuendesa yakawanda data, vhidhiyo, odhiyo nekumhanya kwakanyanya uye inoshandiswa zvakanyanya muinternet network. RG59, RG6 kana RG11 75 ohm coaxial tambo inowanzo shandiswa kuCCTV, CATV, Satellite TV, nezvimwe.
Ndezvipi zvinoshandiswa zvakajairika zve coaxial tambo?2021/03/11
Coaxial tambo ("coax" pfupi uye kunyangwe Mamwe maratidziro ekubatanidza anogona kuwanikwa mairi. Naizvozvo, zvakakosha kuti unzwisise iyi tambo yepakati uye kuti ungaiyedza sei.
Ndeupi musiyano uripo pakati peCAT5e CAT6 Cable?2021/03/10
CTC Connexions inogadzira tambo dzedandemutande, mawaya uye tambo dzecoaxial kwemakore gumi neshanu. "Chikamu 5e" chinoreva Chikamu che5e chisina kuvharwa chakamonana. Ngatitarisei mutsauko uripakati peSuper Chikamu 5 tambo tambo uye Super Chikamu 6 netambo tambo. .
Tambo dzeCAT dzemhangura dzinozotsiviwa neaya emagetsi here?2021/03/10
Mazuva ano, nekuenderera mberi kubuda kwemasevhisi matsva senge gore komputa, dhata hombe, uye 5G, chiyero chedata nzvimbo chinoramba chichiwedzera, uye kuvakwa kwavo nekabhesheni kuri kuramba kuchinyanya kuomarara. Iyo isina kuremerwa uye zvishoma nezvishoma kudzikiswa kweiyo fiber fiber inoita kuti musana wemagetsi network michina uye kudiwa kweiyo optical fiber iri kukura zvakare. Chiyero cheiyo fiber fiber munzvimbo hombe dzedhata chakakwira se70%, iri yakakwirira kwazvo kupfuura iya yemhangura tambo. Vazhinji vevashandisi vaviri vakamonyanisa vanonetsekana kuti tambo yemhangura inozotsiviwa zvizere neefiber fiber.
Chii chatinofanira kuita kana mota yako bhatiri richierera? Ingo uya neEmergency booster tambo.2021/03/09
Chii chatinofanira kuita kana mota yako bhatiri richierera? Ingo uunze Emergency booster tambo pamwe ne12V Power bhangi.
Tsvagiridzo yemusika: Ko iyo HDMI tambo inozotsiva iripo mhangura HDMI?2021/03/09
Tsvagiridzo yemusika: Ko iyo HDMI tambo inozotsiva iripo mhangura HDMI? Chii chiri ramangwana reOptical HDMI?
HDMI tambo dzinowanzo shandiswa uye dzakakosha. Ndeupi ari nani?2021/03/08
HDMI tambo dzinowanzo shandiswa uye dzakakosha. Ndeupi ari nani?
TV yako inewo HDMI 2.1 yePS5 yako here?2021/03/08
TV yako inewo HDMI 2.1 yePS5 yako here?
USB Type C kune HDMI inounza chiitiko chitsva2021/03/08
Munguva pfupi yapfuura, iyo HDMI Licensing Kambani yakaburitsa zviri pamutemo iwo mamiriro eiyo HDMI switch switch yakagadzirirwa USB Type-C. Kuberekwa kweiyi mode kunobvumira HDMI-inogoneswa sosi dhijitari kuti ive yakabatana neiyo HDMI-inogoneswa kuratidza uchishandisa USB Type-C chinongedzo, isina inorema protocols uye macomputer, maadapter kana zvishandiso zvekuchengetedza zvemidziyo, uye inogona kutapurirana kuburikidza netambo imwe chete HDMI chiratidzo cheichi unit, seApple's Macbook, inogona kusonamirwa kuTV kana monitoreti.
NHK ichatepfenyura ye2021 Tokyo Olimpiki pane yavo 8K Channel2021/03/07
Kambani yeJapan yeNHK yakazivisa kuvhurwa kweterevhizheni yayo yekutanga ne 8K resolution muna 2018. Terevhizheni inotepfenyura inosvika 7680 x 4320 pixels yakatanga muJapan kutanga kwaDecember 2018. Mitambo iri kuuya ye2021 Olimpiki muTokyo ichatepfenyurwa mhenyu mu8K.
Chii chinonzi HDMI 2.1?2021/03/06
Chii chinonzi HDMI 2.1?
Izvo zvakakosha here kusarudza iyo HDMI Cable Kureba?2021/03/05
Iko hakuna muganho wakajeka weHDMI Cable Kureba. Sangano reHDMI pacharo rinoratidza kuti chiratidzo cheHDMI chinogona kutapuriranwa pamusoro pemamita mazana matatu.
Chaja inokurumidza inokuvadza bhatiri here?2021/03/05
Chaja inokurumidza inokuvadza bhatiri here?
Coaxial tambo haigone kufuratirwa2021/03/05
Zvekuyera tambo tambo, takakurukura zvakawanda nezve zvakaenzana zvakapetwa-zviviri zvemhangura cabling zvine hukama, senge Chikamu 6 (CAT 6), Chikamu 6 (CAT 6A) uye Chikamu 8 (CAT 8). Kunyangwe iri mhando yekabhesisi ichishandiswa zvakanyanya kutsigira kutapurirana kweEthernet yezwi, data, uye vhidhiyo, hazvireve kuti ndiyo yega mhando yemhangura cabling yaungangosangana nayo.
USB TYPE-C ruzivo2021/03/04
USB TYPE-C ruzivo
3 nzira dzekuchaja dzeMagetsi Mota2021/03/04
3 nzira dzekuchaja dzeMagetsi Mota
Nhanganyaya yeCAT8 Cable2021/03/04
Kana iwe uri mu network indasitiri yekutaurirana, ndinotenda iwe unofanirwa kuziva dzimwe tambo dzeEthernet, senge Chikamu 5e network tambo, Chikamu che6 network tambo uye Chikamu 7 network tambo. Asi iwe unoziva here kuti Cat8 sere-chikamu network tambo ndeyei? Yakasiyana sei neChechi 5 network tambo, Chikamu 6 / Super 6 network tambo uye Chikamu 7 / Super 7 network tambo? Ngatitore iwe kuti uzive chizvarwa chitsva che network network jumpers-Cat8 mhando sere dzetambo tambo.
Solar Panel LED yekunze WiFi Kamera2021/03/04
Simba rezuva ndere simba risingaperi rinogona kudzoreredzwa girini sosi, mwenje wezuva, haufanirwe kunetseka nezvemagetsi anodhura, haufanirwe kunetseka nezvekusajeka zvakakwana! Simba rekuchengetedza nyanzvi rinogona kukupa iwe zvisingatarisirwi kushamisika!
Rudzii rwemabhangi emagetsi anotakurwa nendege?2021/03/04
CTC Connexions inyanzvi inogadzira inotakurika Mabhangi emagetsi. Mabhangi emagetsi anogona kutakurwa nendege here? Ngatizivei pamwechete. Mazhinji eNational Civil Aviation Administration yeChina anoti simba rakatarwa rakaderera kana kuti rakaenzana ne100W uye rinogona kutakurwa newe, asi risina kuongororwa. Kana iro bhangi remagetsi rakatemerwa kupfuura 100Wh asi risingapfuuri 160Wh, rinogona kutakurwa chete mushure mekubvumidzwa nendege, asi mumwe mufambi haatakure anopfuura mabhanga emagetsi maviri.
Chii chinonzi HDMI interface? Nzira yekusarudza HDMI tambo?2021/03/03
Chii chinonzi HDMI interface? Nzira yekusarudza HDMI tambo?
Chii chinonzi Coaxial Cable?2021/03/03
Chii chinonzi Coaxial Cable? Chii chinonzi RG59 RG6 RG11?
Ungasarudza sei yakamonyaniswa peya Ethernet Cable mune network yekutarisa kamera yekuisa chirongwa?2021/03/03
Mamiriro ekushandisa uye misiyano pakati peCoaxial Cable & Ethernet Cable.2021/03/03
Ndeupi musiyano uripo pakati peHDMI2.1 uye HDMI2.0?2021/03/03
Parizvino, HDMI 2.0 inogona kuwana 4K mifananidzo pa60 FPS kana 8K mifananidzo pa30 FPS. Iyo itsva HDMI 2.1 inogona kuratidza mifananidzo ye4K pa120 FPS kana 8K mifananidzo pa60 FPS, uye inogona kunyange kutsigira 10K resolution resolution.
Musiyano uripo pakati peApple mheni interface uye USB Rudzi C.2021/03/03
USB-C inomirira USB Type C, inova yekuwedzera kweiyo inowanzo shandiswa USB standard. Hunhu hweiyo nyowani diki idiki uye inoyevedza, zvisinei nechero kunaka uye kwakashata gwara, zvine hunhu. Pfungwa, iyo Type C interface inogona kushandiswa pamabhazi eUSB 2.0 uye 3.0, asi parizvino vagadziri vanowanzo shandisa Type C nechizvarwa chitsva cheUS33.1 kutapudza zvirevo.
Uya neJumper Cable uye bhengi remagetsi iro rinogona kukubatsira iwe kutanga injini yemota mune emergency2021/03/03
Dzimwe nguva unongoda Jumper Cable uye bhengi remagetsi iwe usingakwanise kutanga injini yemotokari
Zvakajairika CCTV Cable kuzivikanwa2021/03/03
Coaxial tambo haifanire kufuratirwa2021/03/03
USB3.1 interface uye Type-C2021/03/03
USB Type-C (USB-C ipfupi), ine saizi-nyowani dhizaini uye ine zita rinotonhorera, zviri nyore kwazvo kuita shamwari dzinonzwa izwi iri dzinofunga kuti iyi idanho reUSB, asi haisi . Type-C ingori chikamu cheiyo USB 3.1 standard, kwete itsva standard.
TESLA EV Musika mu2020 EV Chaja inoda iri kuwedzera2021/03/03
TESLA EV Musika mu2020EV Chaja charger iri kuwedzera
MIBVUNZO paCTC Connexions CCTV Cable2021/03/03
Cable chitupa I2021/03/03
Cable Chitupa II2021/03/03
Cable kusarudzwa kwemarudzi ese emapurojekiti cabling
Coaxial tambo yekutarisa2021/03/03
Iyo coaxial tambo inoshandisa yakaoma waya yemhangura seyakadzika uye nhete yekudzivirira zvinhu. Iyi nhete yezvinhu zvinoputira yakakomberedzwa neyakavezwa yakarukwa mesh kondakita, uye mambure akafukidzwa netaundi yezvidziviriro zvinhu. Kune tambo mbiri dzinoshandiswa zvakanyanya dze coaxial. Imwe ndeye 50-ohm tambo, iyo inoshandiswa kufambisa dhijitari, uye inonziwo baseband coaxial tambo nekuti inonyanya kushandiswa kutakura baseband; imwe ndeye 75-ohm tambo, iyo inoshandiswa kufambisa analogog, inova tambo yebhendi coaxial inokurukurwa muchikamu chinotevera. Musiyano uyu unokonzerwa nezvakamboitika zvikonzero, kwete zvehunyanzvi zvikonzero kana vagadziri.
Ungasarudza sei tambo yekuteerera?2021/03/03
Kufambisa nzvimbo yemakesi akasiyana-siyana muVhidhiyo Kuongorora2021/03/03
8K Nyowani Tekinoroji: 8K HDMI2.1 Zvimiro uye Scheme Kugovana2021/03/03
Inonyanya kufarirwa 8K dijitari vhidhiyo interface ndeye HDMI2.1. Iyi inotevera rondedzero pfupi yemafomati, nzira yekufambisa, DSC basa uye HDR basa rinotsigirwa neHDMI2.1.
Kubhadharisa nePower bank kunokuvadza foni? Chokwadi chiri pano2021/03/03
Kubhadharisa nePower bank kunokuvadza foni? Chokwadi chiri pano - Connexions Technology (Dong Guan) Ltd.
Nhanganyaya yemaTambo akati wandei anowanzo shandiswa mukutarisisa nekuchengeteka2021/02/04
Ungasarudza sei CAT6 kana CAT5E yePoE switch?2021/01/29
Ndeupi musiyano uripo pakati peCAT5E neCAT6 muzvivakwa zvine hungwaru2021/01/28
Tchaja mota yako yeEV magetsi home ‰ kumba - Tinojekesa mibvunzo yakakosha2021/01/22
Magetsi Mota iri kuwedzera kuve inozivikanwa muChina, Europe, USA & mamwe matunhu, EV Chaja ndechimwe chezvinhu zvakakosha zvatinoda.